Mandaitra ve Ilay Voady hoe Hijanona ho Virjiny? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Nzema Oromo Ouzbek Ouzbek (Romanina) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tiorka Tiv Tseky Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Inona ilay voady hoe hijanona ho virjiny?
Mandaitra ve izy io?
Zavatra tsara kokoa noho ilay voady
Voady atao an-tsoratra na am-bava izy io hoe tsy hanao firaisana alohan’ny fanambadiana.
Lasa nalaza io voady io tamin’ny 1990 tany ho any, rehefa natomboka tany Etazonia ilay fandaharana hoe “Izay Tia Mahandry.” Ny Fiangonana Batista Tatsimo no nandamina azy io. Nampiasa tanora vitsivitsy sy toro lalana avy ao amin’ny Baiboly ilay fiangonana mba hampirisihana ny tanora hafa tsy hanao firaisana alohan’ny fanambadiana.
Nisy fandaharana nitovitovy tamin’io, tsy ela taorian’izay. Nomena peratra volafotsy izay mpanatrika nanao an’ilay voady, mba ho marika (sy ho fampahatsiahivana) hoe efa nivoady tsy hanao firaisana alohan’ny fanambadiana izy ireo.
Miankina amin’izay anontanianao ny valin’izany.
Hitan’ny mpikaroka atao hoe Christine Kim sy Robert Rector fa “vitsy kokoa ny tanora manao firaisana na any aoriana kokoa izy ireo vao manao an’izany rehefa mivoady hoe hijanona ho virjiny.”
Hitan’ny fikambanana iray atao hoe Guttmacher fa “mety hanao firaisana hoatran’ny tanora tsy manao an’ilay voady ny tanora mivoady hoe hijanona ho virjiny.”
Nahoana no tsy mitovy ny valin’ny fikarohana?
Olona manao an’ilay voady sy olona tsy manao an’ilay voady nefa tsy mitovy hevitra momba ny firaisana no ampitahaina amin’ny fikarohana sasany.
Olona manao an’ilay voady sy olona tsy manao an’ilay voady nefa mitovy hevitra momba ny firaisana no ampitahaina amin’ny fikarohana hafa.
Inona no asehon’ilay karazana fikarohana faharoa? Nilaza ny Profesora Janet Rosenbaum, manam-pahaizana momba ny tanora, fa “tsy misy maha samy hafa ny fitondran-tenan’ilay tanora nanao voady sy ny an’ilay tanora tsy nanao voady” rehefa afaka dimy taona.
Tsara ny tanjon’ilay voady hoe tsy hanao firaisana alohan’ny fanambadiana. Tsy manampy ny tanora hitana ny teniny anefa ilay izy. Milaza ny Profesora Rosenbaum fa betsaka no mivoady hoe hijanona ho virjiny nefa “tsy manatanteraka an’ilay voady akory. Tsy hoe rehefa mandray anjara amin’ny fandaharana iray ilay olona dia tsy hanao firaisana alohan’ny fanambadiana. Izy mihitsy aloha no tokony ho tapa-kevitra ny tsy hanao an’izany.”
Manampy ny olona tsirairay ho tapa-kevitra ny hijanona ho virjiny ny Baiboly. Tsy asainy manao voady an-tsoratra na am-bava anefa ilay olona, fa ampiany hanana “fahaiza-misaina efa nozarina hanavaka ny tsara sy ny ratsy.” (Hebreo 5:14) Tsy hoe mijanona ho virjiny mantsy ny olona iray satria fotsiny hoe tsy te ho tratran’ny aretina na ho bevohoka. Te hanome voninahitra an’ilay Mpamorona ny fanambadiana kosa izy.—Matio 5:19; 19:4-6.
Natao hahasoa antsika ny toro lalan’ny Baiboly. (Isaia 48:17) Afaka miezaka daholo ny olona rehetra, na firy taona izy na firy taona, mba ho tapa-kevitra ny hankatò an’ilay didin’Andriamanitra hoe: “Andosiro ny fijangajangana.” (1 Korintianina 6:18) Rehefa manambady izy any aoriana any, dia ho afaka hankafy ny firaisana, nefa tsy hanenina na hikorontan-tsaina hoatran’ireo manao firaisana alohan’ny fanambadiana.
Miezaha ho Tapa-kevitra ny Hijanona ho Virjiny
Ahoana raha misy miteny hoe: ‘Ianao ve dia mbola virjiny foana?’ Hainao ve ny manazava ny hevitrao, sady mampiasa Baiboly?
Hizara Hizara Mety ve ny Mivoady hoe Hijanona ho Virjiny?
ijwyp no. 50